Budata GIF Maker for Instagram maka Ios
Budata GIF Maker for Instagram
Free Budata maka Ios (13.50 MB)
Budata GIF Maker for Instagram,
GIF Maker maka Instagram bụ ngwa GIF emebere maka ndị ọrụ Instagram. Ngwa efu, nke na-adịghị ekwe ka ịkekọrịta Gif, na-eme ka o kwe omume iji otu mmetụ ziga Gif na Instagram, enwere ike iji ya na iPhone na iPad.
Otu nime ngwa na-enye ohere ịkekọrịta Gif na Instagram bụ GIF Maker maka Instagram. Ọ na-agbanwe Gif ndị ị na-echekwa na ekwentị gị na mbadamba ma ọ bụ Gifs dị na Dropbox ka ọ bụrụ usoro ị nwere ike ịkekọrịta na Instagram. Ọ na-eme nke a site nịtụgharị si gif ka MP4 format. Ị nwere ike ịhazigharị ihe niile site na oge vidiyo ị nwetara site na gif ruo ogo ya, site na ọsọ egwu ruo na ọnọdụ.
Ngwa, nke na-azọpụta gị nsogbu nke ịchọ Gifs site na igosi Gifs echekwara na mpịakọta igwefoto gị iche, na-eme usoro ntụgharị ngwa ngwa. Naanị ntụpọ nke ngwa ahụ; Ịgbakwunye logo mgbe ntughari. Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepu akara ngosi ma nwee atụmatụ ndị ọzọ, ịkwesịrị ịzụrụ (17.99TL).
GIF Onye kere maka atụmatụ Instagram:
Ọ dị mma na ịtụgharị gifs na usoro vidiyo
Chọta Gif niile na mpịakọta igwefoto
Na-ebubata Gifs na Dropbox
Lelee etiti gifs wee chekwaa etiti ọ bụla nụzọ dị mfe
Nhụchalụ gifs na vidiyo
Gbanwee ọsọ egwu gif (0.5X, 2X, 4X)
Tọọ ụzọ gif si egwu (atụgharị, ping-pong, nkịtị)
Nkwado mmetụ 3D
GIF Maker for Instagram Ụdịdị
Nha faịlụ: 13.50 MB
Mmepụta: JIAN ZHANG